Dawlada Puntland Oo Mamnuucday Qabashadda Libaax Badeedka Iyo Shabaagaha Caaga Ah | puntlandi.com
Dawlada Puntland Oo Mamnuucday Qabashadda Libaax Badeedka Iyo Shabaagaha Caaga Ah
Wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland-Soomaaliya ayaa mamnuucday qabashada libaaxa indho-buurka iyo isticmaalka shabaagaha caag ah, kadib markii madaxda Wasaaradu ay shir Saxaafadeed ku qabteen xafiiska wasaaradda ay ku leedahay magaalada Boosaaso.
Madaxda wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland ayaa warbaahinta u qeybiyey dikreeto lagu mamnuucayo adeesiga shabaagaha caaga iyo qabashada libaaxa indho-buurka, waxayna Digreetadasi u qornayd sidan:-
Ku: dhammaan shirkadaha qalabka kalluumeysiga.
Ku:Dhammaan dalladaha iyo ururada kalluumeysiga.
Ku: Taliska ciidanka boliiska Puntland.
Ku: Ciidanka badda Puntland.
Ku: Wasaaradda arrimaha gudaha Puntland.
Ku: Wasaaradda Dekadaha iyo gaadiidka badda Puntland.
Ku: Wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland.
Og: Wasiiru dowlaha kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland.
Og: Wasiir ku xigeenka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland.
Og: Agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland.
Og: Madaxweynaha Puntland.
Ujeedo dhaqan geiinta xeer madaxweyne (mamnuucid shabaagaha caaga ah)
Munayaal sida ku cad xeerka madaxweynaha Lr.70 ee soo baxay bishii Juun 2014, waxaa la mamnuucay shabaagaha caaga ah soo dejintooda, ka ganacsigooda, isticmaalkooda iyo adeegsigooda qalab ahaan ama hab ahaan badaha Puntland.
Hadaba waxaa la idin farayaa in aad dhaqan gelisaan xeerka madaxweynaha hadda wixii ka dambeeyana ay tahay dambi in la soo dejiyo, laga ganacsado, la isticmaalo ama la adeegsado shabaagaha caaga ah gudaha Puntland.
Sidoo kale qofna ma sameyn karo ganacsi ahaanna uma keeni karo qalab iyo gaadiid kalluumeysi ayna oggolaan dalabkiisa iyo naqshadiisa wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda sida ku cad qodobka 72-aad ee xeerka kalluumeysiga Puntland Lr. 12 ee soo baxay bishii desember ee 2011.
Ciddii ka hortimaada xeerkaasi waxaa la marin doonaa sharciyada u dhigan dalka, gaar ahaan kuwa khuseeya ku xadgudubka shuruucda kalluumeysiga.
Sidoo kale wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland ayaa soo saartay wareegto lagu mamnuucayo kalluumeysiga Libaaxa indho-buurka.
Ku: Shirkadaha kallumeysiga.
Ku: Ururada kalluumeysiga ee ee heer degmo
Ku: Maamulada gobolada iyo degmooyinka.
Ku: Laamaha amniga Puntland.
Ku: Wasaaradda duulista hawada iyo garoomada.
Ku: Wasaaradda maaliyadda.
Ujeedo xirmo xiliyeed kaluumeysiga libaaxa indh-buurka.
Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland Cabdirashiid Maxamad Xirsi markuu arkay xeerka kalluumeysiga Puntland qodobkiisa 71-aad, markuu arkay wasiiru dowlaha iyo wasiir ku xigeenka wasaradda, markii uu dhegeystay talo bixinta khuburadad culuumta badda iyo kalluumeysiga ee ku aadan xaaladda uu ku sugan yahay libaaxa indho-buurka, markuu tixgeliyey doorka uu libaax badeedka kaga jiro sil-silidda cuntada iyo guud ahaan muhiimadda uu u leeyahay kale duwanaasha noolaha, sidoo kale markuu wasiirka tixgeliyey xaalufka ba’an ee lagu hayo libaaxa indho-buurka taasi oo sababi karta in uu dhakhso u dabar go’a haddii aan si deg-deg ah wax laga qaban, markii uu darsay shabaagaha caaga ah ee mamnuuca ah ee loo adeegsado libaaxa indha-buurka qabashiida oo tayadoodu liidato isla markaana badankood ku go’ a badda iyagoo sii wada waxa loo yaqaan kaluumeysi rooxaameed sababana dhimashada noole fara badan.
Wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadaka badda Puntland-Soomaaliya Cabdirashiid maxamad Xirsi ayaa ugu dambeen waxa uu amray:
A-Xirmo xiliyeed ku aadan qabashada libaaxa indho-buurka oo ka fulaysa dhammaan xeebaha Puntland mudadeeduna tahay laba sano oo ka bilaabanaysa maalinta wareegtadan soo baxdo.
B- Inta lagu guda jiro xirmo xiliyeedka qof , koox, shirkad, urur, ama iskaashato uma howl geli karto in uu qabsado libaaxo indha-buurka.
C-In aan laga dhoofin karin garoomada iyo dekadaha Puntland libaaxa indho-buurka saliidiisa, haragiisa iyo cadkiisa inta lagu guda jiro xirmo xiliyeedka la iclaamiyey ee kor ku xusan.
D-Inta lagu jiro mudadaasi labada sano ah wasaaraddu waxay sameyn doontaa cilmi baaris dhammeystiran oo lagu darsayo xaaladda kheyraad badeedka.
Dhammaan xafiisyada ay wareegtadan sida tooska ah iyo sida dadban ugu socota waxaa lagu wargelinayaa in ay fuliyaan awaamiirtan lagu xili xirmeynayo qabashada libaaxa indha-buurka.
Cidii ka hortimaada awaamiirtan , jebisana xirmo xiliyeedka la iclaamiyey waxaa la marinayaa sharciga u dhigan dalka, gaar ahaan kuwa khuseeya ku xadgudubka shuruucda kalluumysiga.